IJavanese, ikati ethandekayo | Amakati eNoti
Ikati yaseJavanese sisilwanyana esinqabileyo esiguquguquka ngokulula siphile kwiflethi Kwaye uyakufuna kuphela ukuntywila, ukongeza kwisondlo esaneleyo, ukonwaba nosapho.
Ukuba ungomnye wabo bafuna ukuba nomhlobo othandekayo nothanda uboya onenwele ezinde nezithambileyo, iJavanese yikati efanelekileyo oyifunayo.
1 Imvelaphi kunye nembali yeJavanese
2 Zintoni iimpawu zayo zomzimba?
3 Injani indlela abaziphethe ngayo?
4 Uyinyamekela njani ikati yaseJavanese?
5 Ixabisa malini ikati yasejava?
Imvelaphi kunye nembali yeJavanese
Umfanekiso - Javanescat.com
Nangona kunokuba ngokuchaseneyo, Olu luhlobo aluveli kwisiqithi saseJava njengoko igama laso linokubonisa, kodwa kunoko kubafuyi baseNgilani abawela iikati zaseMpuma zeShorthair neBalinese pha kwiminyaka ye-1960. Ukongeza kwiJavanese, igama elenziwe ngomnye wabantu bokuqala abakhethe iikati ezintle, ikwabizwa ngokuba yi-Mandarin okanye i-Oriental Longhair.
Zintoni iimpawu zayo zomzimba?
Yikati ephakathi ngokomgangatho, ene ubunzima phakathi kwe-4 ne-6 kilos. Umzimba ulinganiswe kakuhle, unemisipha, ubhityile, uneenwele ezinde, ezintle nezinesilika eziwukhuselayo. Le inokuba ngumbala omnye, ufudo, itabby, isilivere tabby, van, harlequin, umsi, ibicolor.
Intloko yakhe imilo engunxantathu, Ngempumlo ithe nkqo, iindlebe zayekelela emacaleni. Amehlo aphakathi ngokomlinganiselo, i-amangile ngombala. Imilenze yayo yomelele, kwaye umsila mde kakhulu kwaye ubhityile.
Ine a iminyaka yobomi eyi-14-18 yeminyaka.
Injani indlela abaziphethe ngayo?
Umfanekiso - Linkbeef.com
Luthando nje lwekati 🙂. Unothando kakhulu, ihlala icela ingqalelo yabantu bayo. Ngapha koko, yi Unxibelelwano olukhulu, kakhulu kangangokuba kulula ukuyazi into ayifunayo kunye / okanye uziva ngokumamela nje. Kukwanjalo ulumke kakhulu, Ngubani amaqhinga aliqela anokufundiswa ngokulula.
Inokuhlalisana kakuhle nabantu abadala kunye nabantwana, kodwa kubaluleke kakhulu ukuba bobabini bahloniphe isilwanyana kwaye bangatsali umsila okanye iindlebe, kwaye badlale ngendlela enembeko ngaso.
Uyinyamekela njani ikati yaseJavanese?
Kwiivenkile zezilwanyana uza kufumana iintlobo ezininzi zokutya kwekati: ukutya okomileyo, ukutya okumanzi, kwaye banokuba nezinto zendalo ezinje ngeSumum okanye iYum Diet. Zonke, ukuba azinako ukutya okuziinkozo, ziya kuba lukhetho olufanelekileyo kwikati yakho yaseJavanese. Unokukhetha nokumnika ukutya okwenziwe ekhaya (okanye uBarf), ukuba unganxibelelana nengcali yesondlo ekuqondayo ukondliwa kwabantu basetyhini.
Kutheni le nto ikati laseJavanese kungafanele londliwe ngesiriyeli? Isizathu esinye esilula: inokubangela ukwaliwa. Iikati zizilwanyana ezitya inyama, kwaye azinawo ii-enzymes eziyimfuneko ukuze zikwazi ukufunxa irayisi, umbona, ... ngokufutshane, ezi ntlobo zezithako. Kwakhona, ukuba banikwa izidlo Ayinamveliso, idyasi yabo iya kukhazimla, kwaye impilo yabo iya kuba ntle.
Masiqale sithethe ngeyakho pelo. Le inde, ke kuya kufuneka uyihlambe yonke imihla. Ukulungiselela le njongo ungasebenzisa ibrashi okanye ikhadi, nangona sicebisa i-FURminator (okanye efanayo) kuba ukuba neebristles eziqinileyo kwaye kunye, kususa iinwele ezininzi ezifileyo.
Malunga ne amehloUkuba ubona ukuba uneemfihlo ezifana nee-legañas, zisuse ngobunono nge-gauze emanzi (ngamanzi). Sebenzisa i-gauze kwiliso ngalinye, kuba ukuba omnye kwaba babini wosulelekile, ungaludlulisa usulelo kulowo usempilweni.
Ekugqibeleni, i iindlebe Kuya kufuneka ziphononongwe amaxesha ngamaxesha. Ukuba ubona ukuba zingcolile kwaye zinevumba elibi, nxibelelana nodokotela wezilwanyana njengoko enokuba ne-otitis okanye enye ingxaki.
Umfanekiso - Petspyjamas.com
Ayinazo izifo ezixhalabisayo, ngaphandle kwezo zinokuba nalo naluphi na uhlanga, njengeleukemia, ukubanda, phakathi kwabanye. Kodwa into ekufuneka uyigcine engqondweni kukuba, ngenxa yobude beenwele zakho, kuya kufuneka uyihlambe yonke imihla ukunciphisa umngcipheko wokuba zenziwe. iibhola zeenwele. Ukuba oku kuyenzeka, unokugagqa okanye ugabhe, kwaye ube nengxaki yokuhamba kwamathumbu.
Ewe, ukuba ngequbuliso ubona ukuba uphantsi, okanye ubonakalisa ukungaphatheki kakuhle, kuya kufuneka unxibelelane nogqirha wezilwanyana ngokukhawuleza, ngakumbi xa uqaphela ukuba utya kancinci, unobunzima bokuzikhulula, kunye / okanye ukhalaze iintlungu.
Ixabisa malini ikati yasejava?
Ukuba uzimisele ngokupheleleyo ukufumana ikati yohlobo lweJavanese, kwaye ufuna ukwazi ukuba ingakubiza malini, ngaphezulu okanye ngaphantsi, kuya kufuneka uyazi ukuba ixabiso lijikeleze 800 euro. Ewe kubalulekile ukuba injana ineenyanga ezimbini ubuncinci ubudala, kwaye sele itya ukutya okuqinileyo.
Ngayiphi na imeko, ukuba ungamlinda ade ajike iinyanga ezintathu ngcono, kuba oku kuya kunciphisa umngcipheko wokuba neengxaki ngenxa yokungazithembi kwixesha eliphakathi. Kodwa ewe, ukusukela ngexesha aneeveki ezisibhozo ubudala de ekugqibeleni umse ekhaya, kuya kufuneka umtyelele ukuze akwazi kwaye azuze ukuzithemba.
IJavanese bubuhle obumnandi, awucingi? Apha sikushiya neefoto ezininzi ezibonisa ukuba intle kangakanani:
Umfanekiso - Pawesomecats.com
Umfanekiso - Vetstreet.com
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » IJavanese, ikati ethandekayo